Sucuudiga oo ku yaboohay dhammaan lacagtii loo rabay Yemen - BBC News Somali
Sucuudiga oo ku yaboohay dhammaan lacagtii loo rabay Yemen
Image caption Sacuudi Carabiya waxa ay doonaysaa in ay wiiqdo awoodda Xuutiyiinta Yemen.
Sucuudiga oo hoggaaminaya weerarada dhanka cirka ah ee ka dhanka ah fallaagada xutiyiinta Yemen ayaa ku yaboobahay dhammaan lacagta ay jimcahii codsatay Qaramada Midoobay si loo gargaaro dadka tabaaleysan ee reer Yemen.
Wakaaladda wararka ee dalka Sacuudiga ayaa sheegayso in dalkaasi uu bixinayo lacag dhan 274 milyan oo doolar oo wax looga qabanayo xaaladda bani'aadanimo ee haysata dadka reer Yemen ee dagaalada halkaasi ka socda ay saameeyeeyn.
War rasmi ah oo uu soo saaray Sacuudiga ayaa waxa lagu sheegay in Sacuudigu uu garab taagan yahay walaalahood Yemen.
Dhanka kale, madaxweynaha dalka Iran Xasan Ruuxaani ayaa weerar dhanka afka ah ku qaaday dalka Sacuudi Carabiya, kaasi oo la xiriiro ololaha uu horkacayo Sacuudiga ee ka dhanka ah xutiyiinta Yemen.
Qudbad uu u jeediyay ciidanka dalkaasi oo si toos ah looga sii daayay telefishinka Qaranka ayaa madaxweyne Ruuxaani waxa uu ku eedeeyay Sacuudiga in uu gobolka ka abuurayo naceyb, waxa uuna sheegay in Sucuudiga uu heli doono jawaabta arrimahaasi ha dhawaato ama ha dheeraato.